သမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမျှော်ခင်းများ – Pann Satt Lann Books
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ၊ ဩဂုတ်လ ၂၀၀၈
သမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမျှော်ခင်းများ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Ayemya Lay Rosy – September 9, 2020
နာမည်လေးက ‘သမီးဖတ်ဖို့’ ဆိုပေမယ့် သမီးတွေရော၊ သားတွေရော ဖေဖေမေမေ၊ ဘိုးဘိုးဘွားဘွား၊ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် လူတိုင်းလူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လေးမို့ ဖတ်ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ မြားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်း၊ ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ Fashion Image မဂ္ဂဇင်းများထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆရာမောင်သာချိုရဲ့ “သမီးဖတ်ဖို့” ဆောင်းပါးပေါင်း ၁၄၀ ကို special edition အဖြစ် စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Album ပုံစံ၊ ကတ်ထူအဖုံး၊ အတွင်းစာမျက်နှာတွေမှာလည်း ရောင်စုံရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ quality မြင့် လက်ဆောင်ပေးချင်စဖွယ် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုရမလဲ?ဆိုရင်တော့ မသိ၍ဖြစ်စေ၊ သိ၍ဖြစ်စေ လူတော်တော်များများ ကျူးလွန်နေမိတဲ့ “ဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့မရတဲ့ မကောင်းမှု” တွေကို ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ အတ္တကြီးမှု၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေကို မြင်ရတဲ့အခါ စိတ်မသက်သာစွာနဲ့ သမီးရေ ဒီလိုတော့မလုပ်ရဘူးနော်။ လူသားဆန်သူတွေနဲ့ တွေ့ရပြန်တော့ သမီးရေ ဘယ်လောက်လေးစားဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲနော်တဲ့။ ဖခင်တစ်ယောက်က သမီးတစ်ယောက်ကို နူးညံ့စွာ ဆုံးမပြောဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အရေးအသားတွေကြောင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ချင်းစီတိုင်းက ဦးနှောက်ထဲကော နှလုံးသားထဲထိပါ စွဲထင်စေပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆရာ့အသံနဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးတွေကို ဖတ်ပြတဲ့ အစီအစဉ် တစ်ခုကို Mandalay FM မှာ နားထောင်ခဲ့ဖူးတာဆိုတော့ စာအုပ်ဖတ်နေရင်း သရုပ်ကော အသံပါ ခံစားနေရတော့တာပါပဲ။?) ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးတိုင်း ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြန်ယှဉ်တွေးရတာလည်း အရသာတစ်မျိုး။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင်ကော ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။? ဒါကိုအပြည့်အဝလက်ခံမလား။? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မှာတခြားအတွေးမျိုးရှိဦးမလား။?
လူတိုင်းလူတိုင်းသာ ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဘယ်ဥပဒေမှာမှ မပြဌာန်းထားတဲ့ ကျင့်ဝတ်လေးတွေကို နားလည်မယ်၊ လိုက်နာမယ်ဆိုရင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကင်းဝေးပြီး ချစ်စဖွယ် လူ့ဘောင်လောကတစ်ခုဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲရှင်။ စာမြည်းလေးအဖြစ် သဘောကျမိတဲ့ စာစုလေးအချို့ကို ဖော်ပြရင်း အတွေးအမြင်ကောင်းလေးများရနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းလျက်…
#သမီးရေ… ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်က အတန်းရှေ့မှာ အားရပါးရသင်နေတုန်းမှာ ဝါးခနဲသမ်းဝေလိုက်တဲ့ ကျောင်းသားမျိုးကို ဖေဖေတို့တွေ့ဖူးတယ်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်၊ ပညာရှင်တစ်ယောက် စင်မြင့်ပေါ်ကနေ ဟောပြောနေတုန်းမှာ အလကားပါကွာဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း ထထွက်သွားသူတွေကို ဖေဖေတို့တွေ့ဖူးတယ်။ စင်မြင့်ပေါ်မှာ အဆိုတော်တစ်ယောက်က ကြိုးစားသီဆိုနေတုန်း တော်ပါတော့ဗျို့လို့ အော်ထွက်သူတွေကို ဖေဖေတို့တွေ့ဖူးတယ်။ ခြေရင်းအိမ်က အမြတ်တနိုးချက်ပို့လာတဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို မအီမသာလက်ခံရင်း ကျွန်မတို့က အဆီအဆိမ့်ကြောက်တယ်လို့ ပြောထွက်သူ အိမ်နီးချင်းတွေကို ဖေဖေတို့တွေ့ဖူးတယ်။
သမီးရေ… လောကမှာ ကိုယ်ခံတွင်းမတွေ့နိုင်တာတွေက အများကြီးပါ။ ငြင်းချင်စရာတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်လူရင်ထဲမှာ အမာရွတ်ကြီးတွေထင်တဲ့အထိတော့ ဖေဖေတို့ မျက်နှာပြောင်မတိုက်သင့်ကြဘူး။
#တောင်ကြီးမြို့သူရဲ့နောက်ကွယ်က မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲဆောင်းပါးမှ . . .
Yoon Yati (verified owner) – December 20, 2020
I like it so much.This book is really nice 🙂